စွန်ကြိုး | ZAYYA
← မိမိနှင့် မိမိ ~ မကွဲမပြား ဖြစ်လျက် ရှိခြင်း
ရှေ့ နှစ်နာရီ ~ အက်ဆေး →
ကဗျာ ဆရာ တစ်ယောက် က ပြောပြ ~
~ သူဟာ စွန်တစ်ကောင်
~ မှန်စာကြိုးလေး တစ်စ နဲ့ သွယ်သွယ်လေး ကနေရ သတဲ့
သူဟာ စွန်ဆို ~ ကျနော်က ကြိုး
မိမိဘာသာ ပြတ်မယ့် ကြိုး
သူ ~ ဟိုး မိုး အထက်မှာ ဝဲပျံ က နေချိန်
ကျနော် က မမြင်နိုင်တဲ့ မှန်စာမျှင် တစ ~ ပါးလျလျ
ဟော ဟိုမှာလေ ~ တွေ့ရဲ့လား
လွတ်လွတ်ရှင်းရှင်း ပျံဝဲနေလိုက်တာများ ~
လေရူးတစ်ချက် သုတ်ရင် အဲ့ဂလိုပဲ တိမ်းတယ်
ဝိုး ~ ကြည့် !!
သူ ~ အခု
ကောင်းကင်မှာ က – နေ – တယ် ~
ဘယ်လောက်များ လှလိုက်သလဲ !
ဘာမဟုတ်တဲ့ ကြိုးလေးတစ်စ နဲ့
သူ့ဟာသူ ရှင်သန်နေရ တာတဲ့ လို့
ဘယ်သူ ကများ ပြောဦးမလဲ ~
မိမိဘာသာ ပြတ်မယ့် ကြိုး ~
Filed under poem Tagged with kite, love, mood, poem